Ministry prepares to declare Popa as National Geopark | Myanmar Business Today
Home Business Ministry prepares to declare Popa as National Geopark
The Ministry of Natural Resource and Environmental Conservation said that it is preparing to declare the Popa area as the National Geopark. It organizedavideo conference on January 27 to discuss the process of declaring Popa asanational geopark and present the progress on developing the National Geological Garden (draft).
Dr. Ye Myint Swe, Deputy Minister of the Ministry of National Resource and Environmental Conservation, said that the ministry and Myanmar Geosciences Society are working together to designate UNESCO Global Geoparks in Myanmar, has formedanational level Geopark committee and work committee, and has developedaproposal (draft), which is the first step to designate Poppa Region asanational geopark.
Experts from the Myanmar Geosciences Society has doneaground survey to identify geo-sites in Kyaukpadaung Township in Mandalay Region. Creating national or global Geoparks can help protect natural heritage in the country and support the development of tourism and livelihoods of local people. Thus, the minister called for collaboration to create the Popa region asanational geopark.
Government officials including Dr. Saw Nyo Win, Bago Regional Minister for Natural Resource and Environmental Conservation and Municipal, who is alsoamember of the Geopark Working committee, director generals, rectors of the universities, deputy director generals, and working committee.
ပုပ္ပါးဒေသအား အမျိုးသားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။
ပုပ္ပါးဒေသအား အမျိုးသားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေးဆက်လက် ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်နှင့်အမျိုး သားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ် အဆိုပြုလွှာ(မူကြမ်း) ပြုစုထားမှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေတင်ပြရန် ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်း အဝေး(၁/၂၀၂၁)ကို ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက် မနက်က ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘူမိဥယျာဉ် UNESCO Global Geopark များ သတ်မှတ် နိုင်ရေး သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘူမိ သိပ္ပံအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားအဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာ ကော်မတီ နှင့် ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ကော်မတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘူမိ ဥယျာဉ်သတ်မှတ်ခံရရေး အလားအလာကောင်း များ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပုပ္ပါးဒေသကို အမျိုးသား အဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် အဆိုပြုလွှာ (မူကြမ်း)ကို ဘူမိဥယျာဉ် အဆိုပြုလွှာပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ပြုစုရေးသားထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း” ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘူမိသိပ္ပံအသင်းမှ ပညာရှင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်အတွင်း ဘူမိနယ်မြေ (Geosite) များကို ကနဦး ကွင်းဆင်းဖော်ထုတ်ထားပြီး အမျိုးသား အဆင့်နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်များ သတ်မှတ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် နိုင်ငံ၏ ထူးခြား ထင်ရှားသည့် သဘာဝအမွေအနှစ်များကို ထိန်း သိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး ရေး၊ ဒေသခံများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြု နိုင်ရုံ သာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ကြွယ်ဝမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြောင်းများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပိုမိုသိရှိ လာစေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုပ္ပားတောင်ဒေသကို အမျိုးသား အဆင့် ဘူမိဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးသို့ ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သယံ ဇာတ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ စောညို ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်များနှင့် လုပ်ငန်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
Vous serez certainement satisfait de notre service. Les Français, les fiers descendants des aventuriers du 18ème siècle sont mondialement connus pour leur invincibilité Cialis non generique aussi connu comme: vente cialis 5mg cialis feminin avis utilisateur cialis naturel plante recette cialis femme france nantes achat cialis en france cialis generique cipla acheter cialis 20mg pas cher prix cialis andorre prix cialis 20mg suisse achat cialis 60 mg cialis feminin effet quebec acheter cialis en ligne france. viagrasansordonnancefr.com Leur érection n’est pas toujours parfaite.
Previous articleMIC approves 14 new investments
Next articleDaw Aung San Suu Kyi reminds people not to be careless despite the vaccine
Despite orders from the Central Bank of Myanmar to reopen banks on Monday, private banks remained closed on March 8, 2021. “Private banks will not...